भिख माग्दै हिँडेका भिखारी वृद्ध करोडपति व्यापारी भएको खुलासा,कसरि भिखारी वृद्ध करोडपति भए त ! – Samachar Pati
भिख माग्दै हिँडेका भिखारी वृद्ध करोडपति व्यापारी भएको खुलासा,कसरि भिखारी वृद्ध करोडपति भए त !
८ पौष l ६ महिनादेखि सडकमा भिख माग्दै हिँडेका भिखारी वृद्धलाई सबैले केही नभएको व्यक्ति सम्झिरहेका थिए । तर, ती भिखारी वृद्ध करोडपति व्यापारी भएको खुलेको छ । ती वृद्ध भिख माग्दै अचानक एक कलेजमा पुगेपछि उनको पहिचान खुलेको हो । वृद्ध ६ महिनादेखि तको उत्तर प्रदेशको रायबरेलीमा भिख माग्दै गुजारा गरिरहेका थिए ।
ती वृद्ध भिख माग्ने सिलसिलामा अचानक कलेजमा पुगेपछि कलेजका संस्थापकले उनलाई खाना खुवाएर नुहाइदिए । त्यसपछि उनको कपडामा खोजतलास गर्दा उनको खल्तीबाट आधार कार्ड र १ करोड ६ लाख ९२ हजार ७३१ भारतीय रुपैयाँ (१ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ)को बैंकको मुद्दती खाताका कागजात भेटिए । आधार कार्डका आधारमा ती व्यापारी तामिलनाडुका करोडपति व्यापारी भएको पत्ता लागेको छ ।
रायबरेलीको स्वामी सूर्य प्रबोध परमहंस इन्टर कलेजका संस्थापक स्वामी भास्कर स्वरुप जी महाराजका अनुसार १३ डिसेम्बरका दिन ती वृद्ध भिखारीको भेषमा कलेज पुगेका थिए । वृद्धले आफू भोकै भएको इशारा गरेपछि संस्थापक भास्करले उनलाई खाना खुवाएर नुहाइदिए । कपाल काटिदिएपछि उनको कपडा धुनको लागि कपडाको खल्ती छाम्दा यी कागजात भेटिएका थिए । यी कागजात देख्दा त्यहाँ भएका सबै निकै आश्चर्यचकित भएको बताएका छन् ।
आधार कार्डबाट ती वृद्ध तामिलनाडुका करोडपति व्यापारी मुथया नादर भएको खुलेपछि उनको परिवारलाई खबर गरियो । जानकारी पाएपछि परिवार उनलाई लिन आए । वृद्धकी छोरी गीताका अनुसार गत जुलाइमा ट्रेनमा यात्रा गर्ने क्रममा उनी हराएका थिए । त्यसपछि उनको खोजी भइरहेको थियो ।
“यो आखा को के भर ” गीतमार्फत आए गायक रोशन गुरुङ
पोखरा म्याराथनको संरक्षकमा मेयर जिशी, “हामी उत्साहित भएका छौं” अध्यक्ष गुरुङ